Peter Crouch Oo Ka Warbixiyay Faahfaahin Xiisa badan Ee Ku Saabsan Cristiano Waayihiisii Man United – Gool FM
(England) 09 Sept 2018. Weeraryahankii hore kooxda Liverpool ee Peter Crouch ayaa ka warbixiyay faahfaahin xiisa leh ee ku saabsan laacibka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo, gaar ahaan waayihiisii kooxda Manchester United.
Peter Crouch ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Mirror” ee dalka England wuxuu kaga hadlay Cristiano Ronaldo kadib markii uu yidh
“Rio Ferdinand, wuxuu inooga waramay sheekooyin badan ee ku saabsan Cristiano Ronaldo, wuxuu hor istaagi jiray muraayada, wuxuu dhaqaajin jiray timahiisa, isagoo dhahaya waan qurux badanahay”.
“Saaxiibada Cristiano Ronaldo kula sugan kooxda Manchester United ayaa waxay ku odhan jireen, si kasta ay ahaato, Lionel Messi waa ciyaaryahanka adiga kaa fiican”.
Laakiin jawaabta uu bixiyay xiligaas laacibka reer Portugal iyo kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo isagoo waliba dhoola cadeenaya ayaa ahayd: “Laakiin Lionel Messi uma qurux badna sideyda oo kale”.
Si kastaba kabtanka xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa Manchester United kaga soo biiray kooxda Sporting Lisbon sanadkii 2003, ka hor inta uusan u dhaqaaqin Real Madrid sanadii 2009-kii, balse mudo dhan 9 sano kadib wuxuu markale go’aansaday inuu kaga dhaqaaqo kooxda reer Talyaani ee Juventus uu haatan ku sugan yahay.
Bryan Robson oo sheegay in Sanchez uu la mid noqon karo halyeeyada Eric Cantona Beckham iyo Cristiano Ronaldo